The Rohingya News Bank : KIA
At press time, it was unclear if there were any casualties from the attack on Bala Min Htin Bridge at about 7:45 pm, June 23.
A woman who requested for her name not to be published heard two police officers were injured. The officers fought back, firing small and heavy weapons at the KIA.
Labels: 2021, Attack, Bridge, en, KIA, Myitkyina, News, Waingmaw
Labels: 2021, en, Karen, KIA, KNLA, Myanmar insurgents, News, Outpost
A Myanmar military border outpost in territory contested by the Karen National Liberation Army, near Mae Hong Son, Thailand, March 25, 2021
Labels: 2021, en, KIA, Military Helicopter, Myanmar rebel, News
ICJ တရားစွဲမှု ကချင်အဖွဲ့အချို့ထောက်ခံ
နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ကို တက်ရောက်လာစဉ်
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာကို နိုင်ငံတကာတရားရုံး ICJ မှာ အမှုဖွင့်စွဲဆိုတာကို ကချင်အရပ်ဘက်အဖွဲ့ အ စည်း တချို့က ထောက်ခံကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ICJ ကသာ တရားမျှတမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေး နိုင်မှာဖြစ်တယ် လို့ သုံးသပ်ကြလို့ပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ICJ မှာ အမှုရင်ဆိုင်မယ့်ကိစ္စကို NLD ပါတီ က ဦးဆောင်ပြီးတော့ မြို့ကြီးတွေမှာ ထောက်ခံပွဲတွေလုပ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ မြစ်ကြီးနား မြို့လည်း ပါဝင်ဖို့ရှိနေပါတယ်။
Labels: 2019, DASSK, ICJ, KIA, mm, RFA Burmese, Video, ကချင်အဖွဲ့, သတင်း, ထောက်ခံ
Military Atrocities ‘Relentless and Ruthless’ in Myanmar’s Northern Shan State Share Amnesty International has gathered fresh evidence that the Myanmar military is con
Labels: 2019, AI, Atrocities, en, KIA, Myanmar Military, Rohingya, Shan
‘Do more to stop trafficking’.
BANGKOK: Authorities in China and Myanmar are failing to stop the brutal trafficking of young women, often teenagers, from the conflict-ridden Kachin region for sexual slavery, according toareport by Human Rights Watch.
Labels: 2019, Chinese families, Displaced, en, Ethinic Minority, HRW, Kachin, KIA, Kidnappig, Myanmar, News, sexual slavery, Shan State, The Star Online, Trafficking
ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင်း KIA နဲ့ မြန်မာစစ်တပ် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွား
ကိုမိုးဇော် ၊07 မတ်၊ 2019
ကာလအတန်ကြာ တိုက်ပွဲတွေ ငြိမ်သက်နေတဲ့ အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA အ ကြားမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် အတွင်းမှာ တိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်ဖြစ် ပွားခဲ့ ပါ တယ်။ KIA ဘက်ကတော့ တပ်မတော်က အပစ်ရပ်ပြီးနောက် ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ တိုက်ပွဲ နှစ်ကြိမ်ဖြစ် တယ်လို့ ပြောဆိုပေမယ့် တပ်မတော်ဘက်ကတော့ အတည်ပြုတာမရှိသေးပါဘူး။ ရှမ်းမြောက်ဒေသ တိုက် ပွဲအခြေအနေကို ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းရဲ့ သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က ရန်ကုန်မြို့ကနေ သတင်းပေးပို့ ထားပါ တယ်။
Labels: 2019, KIA, mm, TNLA, ကွတ်ခိုင်, မြန်မာစစ်တပ်
တိုင်းရင်းလက်နက်ကိုင် ၄ ဖွဲ့အကောင့်တွေပိတ်ခဲ့တဲ့ FaceBook ကို ကန်ဝါရင့်အမတ် ရှင်းလင်းချက် တောင်းခံ
အင်ကြင်းနိုင် ၊06 မတ်၊ 2019
အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီဝင် ၀ါရင့် ဒီမိုကရက် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Edward Markey
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်လေးဖွဲ့ရဲ့ Facebook အကောင့်တွေကို ပိတ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရဘက်က ငြိမ်းချမ်းရေးစေ့စပ်ညှိုနှိုင်းနေသူတွေ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အမေရိကန်နဲ့ နိုင်ငံတ ကာ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့တွေအပါအ၀င် ပြင်ပကမ္ဘာနဲ့ စေ့စပ်မှုလမ်းကြောင်းကို ဖြတ်တောက်လိုက် တာဖြစ် တယ်လို့ အမေရိကန် ၀ါရင့်အထက်လွှတ်တော်အမတ်တဦးက Facebook ကုမ္ပဏီကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန်ဝေ ဖန်လိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, AA, Edward Markey, Facebook, KIA, KIO, Mark Zuckerberg, mm, MNDAA, TNLA, အထက်လွှတ်တော်အမတ်
ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အမာခံနယ်မြေ တည်ဆောက် တာကို မြန်မာ့တပ်မတော်လက်ခံမှာ မဟုတ်
ဗွီအိုအေ (မြန်မာဌာန)၊ ကိုမိုးဇော် 23 ဖေဖော်ဝါရီ၊ 2019
ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာ တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့ အပစ်ရပ် ၂ လ တာကာလ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ။ ဝဲမှယာ - ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းထွန်းညီ၊ ဗိုလ်ချုပ်စိုးနိုင်ဦး၊ ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း (ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၃၊ ၂၀၁၉)
တပ်မတော်က စစ်တိုင်းဌာနချုပ်နယ်မြေ ၅ ခုမှ အပစ်ရပ်ကာလသတ်မှတ်ပြီးနောက် ၂ လ တာကာလအ တွင်းမှာ တပ်မတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသားတပ်တွေ အကြားတိုက်ပွဲတွေ လျော့ကျ ခဲ့ကြောင်း နဲ့ AA ရက္ခိုင်တပ် မတော်အနေနဲ့ အမာခံနယ်မြေတည်ဆောက်တာကို လက်ခံ မှာ မဟုတ်ကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်လိုက် ပါတယ်။ တဆက်တည်းမှာပဲ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အထက် ပိုင်းမှာ NSCN-K နာဂတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် ဒေသမှာ စစ်ရေးဆောင်ရွက်တာတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင် ဆင်ရေး ကိစ္စတွေကို ထည့်သွင်းရှင်းလင်းပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုတော့ ရန်ကုန်မြို့ အခြေစိုက် ဗွီအိုအေမြန် မာပိုင်း သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, AA, KIA, mm, တပ်မတော်ပြန်ကြားရေး, ဗွီအိုအေ, ရခိုင် တပ်မတော်, သတင်း
ဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေး ကချင်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေ ဦးဆောင်မည်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားနဲ့ ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ IDP စခန်းတွေက စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များကို ၂ဝ၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၃ဝ ရက်နေ့က ပြန်လည်ပို့ဆောင်နေစဉ်။
ရှမ်းမြောက်နဲ့ ကချင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးနဲ့ ပြန်လည်နေရာချထားရေးကို ကချင် ခရစ်ယာန် ဘာသာရေး ဂိုဏ်းပေါင်းစုံက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကချင်လူသားချင်း စာနာမှုကော်မတီ KHCC က ဦးဆောင်ပြီး လာမယ့်မတ်လမှာ စတင်အကောင်ထည်ဖော်သွားမယ်လို့ KHCC ဥက္ကဌ ဒေါက် တာ ခလမ်ဆမ်ဆွန် က ပြောပါတယ်။
Labels: 2019, KHCC, KIA, mm, NRPC, RFA Burmese, ကချင်, မြစ်ကြီးနား, ရှမ်းမြောက်, သင်းအုပ်ဆရာ
By Moe Myint7February 2019
AA deputy chief Maj-Gen. Nyo Tun Aung deliversaspeech atamilitary parade in Laiza, Kachin State in 2018. / AA information page
YANGON—Inavideo message, the Arakan Army (AA)’s deputy chief, Brigadier-General Nyo Tun Aung, told ordinary Arakanese on Wednesday that if the current fighting in northern Rakhine State continues to worsen, it could spread to other places in the state.
Labels: 2019, AA, en, KIA, Nyo Tun Aung, Rakhine